I-EOS ivumela ukuqhuba imisebenzi yokucwangcisa umfanekiso kwi-browser-Geofumadas
NgoJuni, 2018 Iiphotography, Geospatial - GIS
Uninzi lwemisebenzi yokuhlaziya imifanekiso efuna i-Erdas Imagine okanye i-software ye-ENVI ngoku ibuyile kwi-EOS Platform (i-EOS Platform). Le nkonzo entsha yelifu elitsha eqaliswe yi-EOS Data Analytics kubaqeqeshi be-GIS isisombululo esiqingqiweyo sokukhangela, ukuhlalutya, ukugcinwa kunye nokubonwa kweemali ezinkulu ze-geospatial data.
Ngombulelo kwi-Platform ye-EOS uza kufumaneka kwiinkqubo ezinezinto ezine-EOS ezizalisana kunye nokubonelela ngezixhobo ezinamandla ezihlalutyi ze-geospatial.
Idatha yemifanekiso igcinwa kuyo EOS Isitoreji esekelwe efini kwaye ziyafumaneka ukucwangciswa komfanekiso okanye uhlalutyo lokujonga ukude kwaliphi na ixesha; le nto ingaba yifayile yomsebenzisi ongeyibrari, umfanekiso ofunyenwe kuwo LandViewer okanye ifayile yokuphuma Inkqubo ye-EOS.
Kukho ubuncinane izizathu ezibini ukuba kutheni i-asethi ye-asethi ebalulekileyo yesikhulumi: ukucwangciswa kwemali eninzi isebenza kwi-intanethi kwaye inikezela kwi-workflows ye-16 kunye nabanye abaninzi endleleni. Ukongezelela, abasebenzisi banokufumana iimpawu ezibalaseleyo zokubala EOS Umbono ukubonakala ngedatha yenkcazelo kwaye, njengoko kuchazwe ngekamva, uhlalutyo lwayo.
I-platform ye-Agnostic yedatha
Xa kuziwa kwidatha ehlaziyiweyo, unokusebenza kunye neentlobo zeetayethi zee-satellite kunye ne-skyViewer, i-EOS Processing kunye ne-EOS Storage. Ukongeza, abasebenzisi banokulayisha kwakhona iiFooTiff, iJPEG, iifayile ze-JPEG ze-2000 kunye nokusebenzisa i-GIS yokulungisa idatha nge-API okanye kwi-interface yomnatha. I-EOS Vision iyisisitye sakho semisebenzi yedatha ebonakalayo kunye nokuhambelana namafomathi amaninzi (ESRI Shapefile, GeoJSON, KML, KMZ).
Iphakheji epheleleyo yokucwangciswa komfanekiso
Video Ukwenziwa inikezela ngamava enkulu processing lwabo 16 ukuhamba kuquka ethandwayo izixhobo isakhelo (fusion, reprojection, Ukuveliswa), uhlalutyo isekude, photogrammetry kanye ubuchule nezokukhupha neempawu elilodwa lomenzi ukuba akafumaneki naphi na. Lungiselela idatha yakho uhlalutyo LiDAR esondelayo kunye ngumzekelo 3D iya kufumaneka kungekudala.
Imisebenzi yokucwangcisa kwangaphambili njengokufunyanwa kwefu okanye ukulinganiswa kwe-radiometric kukunceda uhlaziye idatha eluhlaza ukuhlalutya kwangaphambili: ungayilungisa imifanekiso ngokwemiphumo yemozulu kwaye ufumane ukukhanya kwangempela okanye iimpawu zokubonakalisa zomhlaba.
Ukufumanisa into, ukutshintsha ukufumanisa kunye nokuhlelwa
Unxibelelwano lwe-neural conversion, olwakhiwa ngaphambili ngu-EOS ukukhupha iimpawu zemifanekiso, ukuvumela ukuba usebenzise iindlela zokukhawuleza ukufumanisa izinto uze ulandele utshintsho kwi-space.
Ngomfanekiso nje weemifanekiso ezininzi kunye nokutshintshwa kwemisebenzi yokutshintsha, unokukulandelela indlela ukuchithwa kwehlathi okungekho mthethweni kuqhubela ngayo ixesha.
Ukufumanisa umda kungabonakalisa imida ngqo yomhlaba wakho wezolimo ukuya kwipixel yokugqibela.
Kunokwenzeka ukubala ukuhamba kweendlela zokupaka ezona zikhulu zentengiso kunye ne-cargorection alection algorithm.
Ulungelelwaniso oluhlalutyo lobugcisa
iimveliso video Platform iyahambisana phantse zonke iintlobo isekude kwaye umsebenzisi uyakwazi ukukhetha kuluhlu olude indices ecacicleyo ukubala kubhabho. Ukongeza iseti epheleleyo indices uhlaza (NDVI, Reci, ARVI, Savi, AVI, njalo njalo), kukho nezalathiso kukucacisa iimpawu landscape (amanzi, ikhephu ngumkhenkce, NDWI, NDSI) watshisa iindawo (yofaka ). Kungcono ukuba nenkululeko kancinane bands ecacicleyo kwaye ingadala nendibaniselwano ngokwesiko bands zifanele ngeyona iimfuno zakho.
Yenza ngokwezifiso kwaye uhlalutye
Isixhobo esibonakalayo esilula se-EOS Processing senza kube lula ukulawula ukucwangciswa kwemisebenzi ngokuya kweemfuno zoshishino lomsebenzisi. Unako ukusetha iiparamitha zokucubungula nokusebenzisa ngokuphindaphindiweyo ukuhamba komsebenzi ukuzenzekelayo imisebenzi yokuhlalutya ephezulu. Uhlaziyo olulandelayo luya kwandisa umgangatho wokwakha i-algorithms yangokwezifiso ukusuka kwimisebenzi ekhoyo yokucwangciswa kwedatha.
Ulimo, amahlathi, ioli kunye negesi kunye namanye amashishini
Ixabiso lemveliso ye-EOS inikezela isisombululo sokubaluleka ngokupheleleyo kubantu, iinkampani kunye nemibutho evela kumacandelo amaninzi.
Ngenkqantosi zezityalo kunye neempawu zokuhlaziya izityalo, igrunomists ziyakwazi ukubeka iliso imeko zezolimo ukuze zibone izifo zezityalo, izilwanyana okanye isomiso. Iingcali zemahlathi zingakwazi ukuhlola umonakalo obangelwa yimililo, ukubeka iliso kwimeko yamahlathi okanye ukunyanzelisa imimiselo yokungena.
I-EOS Platform yindlela enhle yokucwangcisa isithili kunye needolophu, njengoko kunceda abasebenzisi ukuchonga iiklasi zokugcina umhlaba ukuze kuveliswe imephu yemifuno. Ukongezelela, unokwenza uluhlu olupheleleyo lwezinto ezinjengezidolophini ezifana nezakhiwo, iindlela kunye nezinye izinto ezibalulekileyo kuloo ndawo.
Iqonga lingenza ulawulo lweentlekele ngokulinganisa ubuninzi bomkhukula okanye ukufumana imida yomlilo. Ngokumalunga neoli kunye negesi, iyakwazi ukuchonga amaqonga eoli kunye nokuvavanya ummandla wendalo.
Video Data Analytics usebenzisa ilifu-based ukuhlangabezana ezahlukeneyo nkqo kunye neqonga olunye, kunye nocazululo angqiniweyo ngokwezenzululwazi, iinkonzo zenkxaso kunye nokudala iimveliso eziya kongeza ixabiso kude data Ukuzibona ukunika iziphumo-level ingcali ishishini lakho.
Unleash i-potential full data ye-Earth observation kunye ne-EOS Platform, ngqo kwisiphequluli sakho: https://eos.com/platform
Post edlulileyo«Edlulileyo I-ARCADIA BIM - Altermativa i-Revit
Post Next Abokugqibela kumabhaso “woNyaka kulwakhiwo lwezibonelelo”Okulandelayo "
Enye Impendulo "I-EOS ivumela ukwenza imisebenzi yokucwangcisa umfanekiso kwisiphequluli"
Ulwazi luncedo kakhulu! Ndiyabonga